Ogaden News Agency (ONA) – Codbixinta Doorashada Afghanistan oo Wakhti Lagu Daray.
Codbixinta Doorashada Afghanistan oo Wakhti Lagu Daray.
Posted by ONA Admin	/ October 21, 2018
Shacabka dalka Afghanistan ayaa shalay sabtidii u dareeray doorashada mudada dheer dib loo dhigayey, iyadoo ay weeraro badan oo ay geysatay kooxda Talibanka ka dhaceen gobalada & goobaha codbixinta.
Ololaha doorashada Baarlamaanka ayaa waxaa ku tartamaya in ka badan 2560 murashax oo kala socda 84 xisbi siyaasadeed oo is diiwaangeliyey, waxaa maalmihii lasoo dhaafay dalkaasi ka dhacayey weeraro ay kooxda Talibanka la beegsaneyso murashaxiintaasi.
Illaa iyo hada 10 murashax oo kamid ahaa kuwii u tartamayey xilalka ayey kooxdaasi ku dishay weeraro iyo qaraxyo ay la beegsaday goobaha ay ka ololenayeen. Waxaana ugu danbeeyey weerarkii ay ku dileen Taliyihii Amniga ee gobalka Kandahar iyo Guddoomiyaha gobalkaasi, waxaana dib loo dhigay codbixinta gobalkaasi.
Codbixintan ayaa la sheegay inay dib u dhacyo ku yimaadeen qaar kamid ah goobaha codbixinta ee gobalada oo ay ka dhaceen weeraro, in ka badan 30 ayaa la rumeysan yahay inay ku dhinteen shalay iska horimaadyo ka dhacay dhowr goobood.
Guddiga Doorashada ayaa sheegay inay wakhti dheeraad ah ku dareen codbixinta oo la sheegay in lasii wadi doono illaa maanta oo Axad ah, waxaana sidoo kale cillado ku yimaadeen computerada qaabilsan cadeynta dadka diiwaangashan inay codkooda dhiibtaan oo gaaraya in ku dhaw 9-milyan oo qof.